Taleex: Wasiiro ka socda Puntland oo booqday
Wafdi Wasiiro ah oo ka socda Golaha Xukuumadda Puntland ayaa safar kormeer ah ku tagay Degmada Taleex ee Gobolka Sool halkaas oo ay ka jirto horumar la’aan iyo abaaro saamayn ku yeeshay dadka iyo duunyada.
Wasiirka Ku xigeebka Dekadaha iyo gaadiidka bada Puntland Dr Cabdulaahi Aadan Ciise ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu ku qotomo safarkoodu, waxaana uu sheegay in ay u kuurgalayaan xaaladda Degmada Taleex ee Gobolka Sool.
Waxaa uu sheegay in Arrimaha bulshada ay si guud ugu kuur galayaan, Waxaana intaas uu ku daray in socdaalkaan ay hogaaminaysay Wasiirka Haweenka Puntland Aniiso Xaaji Muumin, iyadoona ay halkaas gaysay mashaariic dhanka haweenka la xariira.
Dhinaca kale Wasiirka Haweenka Puntland Aniiso Xaaji Muumin ayaa sheegtay in mashaariic horumarineed ay ka dhagax dhigeen Degmada Taleex ee Gobolka Sool.
Xarumaha Caafimaadka Haweenka ayay sheegtay in qalab badan ay u baahan yihiin, iyadoona xarumaha la dhagax dhigay ay ka mid noqotay Xarun haweenka loogu shaqeeyo taas oo wax badan ka badali doonta sida Wasiir aniiso sheegtay baahiyaha haweenka.